Okokufundisa Nama-Manuwali we-iPhone | Izindaba ze-IPhone (Ikhasi 3)
Ungakuthola kanjani ukulawula okuqinile kwe-USB eyakhelwe ngaphakathi ku-iOS 12
Lokhu kulungiselelwa okusha kwe-iOS kuvimbela ukufinyelela kuchweba le-Lightning ngekhebula le-USB, le yindlela esingafinyelela ngayo kumenyu yayo yokumisa.
Le yindlela ongena ngayo kugalari yezithombe kusuka kuhlelo lokusebenza lwemilayezo ku-iOS 12
Siyaqhubeka nokuhlola i-iOS 12 ukukutshela yonke imininingwane emisha, ngakho-ke igalari yezithombe iyatholakala kusuka kuhlelo lokusebenza lwemilayezo ku-iOS 12.
Isebenza kanjani imodi entsha ye-USB ekhawulelwe ye-iOS 11.4.1
Imodi entsha evinjelwe ye-USB ye-iOS 11.4.1 isilinganiso esithuthukisa ukuphepha kwe-iPhone ne-iPad yethu, futhi sichaza ukuthi isebenza kanjani
I-Recoverit, ikhambi elingcono kakhulu lokuthola amafayela asusiwe
Uma imemori khadi yethu, i-hard disk, i-USB stick ... ziyekile ukusebenza futhi sifuna ukuthola amafayela abenawo, ngeRecoverit kungenzeka.
Ungazithumela kanjani izitika zomsebenzi ezintsha kusuka kumilayezo ku-iOS 12
Siyazi ukuthi singathumela izitika ze-iMessage ku-iPhone, iPad naku-iPod touch, kepha ngokufika kwe-iOS 12 ...
Asikwazi ukungena ngemvume ku-PUBG? Le yindlela yokuxazulula
Sichaza izinyathelo okufanele uzilandele ukuqala kabusha i-PUBG lapho uhlelo lokusebenza lunikeza izinkinga ngendlela esheshayo nelula.
Ku-Actualidad iPhone sifuna ukukubonisa ngalesi sifundo ukuthi ungayicisha kanjani noma uyishintshe kanjani i-PIN yeSIM khadi yakho kwi-iPhone yakho noma i-iPad ene-iOS 12.
Ungayivumelanisa kanjani yonke imilayezo kumadivayisi wethu
Uma ufuna ukufinyelela kuyo yonke imiyalezo noma iMessage oyithola ku-iPhone yakho, khona-ke sizokukhombisa ukuthi singawenza kanjani lo msebenzi usebenze.
Ungawusetha kanjani umkhawulo wokusetshenziswa kohlelo lokusebenza ku-iOS 12
Uma ufuna ukuqala ukubeka imikhawulo yokuthi uzisebenzisa kanjani ezinye izinhlelo zokusebenza, nakhu ukuthi ungakwenza kanjani.
Ungalilungisa kanjani iphutha lendawo ye-GPS ku-iOS 12
IOS 12 iku-beta yayo yesibili futhi ukukhishwa kwesithathu akulindelekile kulezi zinsuku ezimbalwa ezizayo. Ngaphandle…
I-Apple isifundisa ukuthatha izithombe zebhola (kanye neminye imidlalo, kunjalo)
U-Apple ushicilele amavidiyo ayisihlanu ochungechunge lwawo oluthi “How to shoot on iPhone” (“Ungazithatha kanjani izithombe nge-iPhone”) futhi, kulokhu, bekukhona ngesikhathi seNdebe Yomhlaba.
Ungayifaka kanjani i-iOS 12 Public Beta ku-iPhone yakho noma ku-iPad
I-iOS 12 Public Beta isiyatholakala futhi sichaza ukuthi ungabhalisela kanjani uhlelo olusemthethweni lwe-Apple bese uyifaka kudivayisi yakho.
Ungawakhetha kanjani amaringithoni athile woxhumana naye
Ku-iPhone News sikulethela okokufundisa kokuthi ungawakhetha kanjani amaringithoni athile woxhumana naye.
Ungazikhiya kanjani izinhlelo zokusebenza nge-Screen Time ku-iOS 12
Enye yezinto ezintsha ezifanele kunazo zonke ezibandakanyayo yimodi Yesikhathi Sesikrini esizosivumela ukuvimba ukusetshenziswa kwezinhlelo zokusebenza ku-iPhone.
Ungawalanda Kanjani Amaringithoni kusuka ku-iPhone ngaphandle kwe-iTunes noma i-Jailbreak
Kulesi sifundo sizochaza ukuthi ungalanda kanjani ukuncenceza kusuka ku-iPhone ngaphandle kwe-iTunes noma i-Jailbreak, okusheshayo nokulula.
Izinqamuleli ezintsha ze-3D Touch zekhamera namanothi ku-iOS 12
I-iOS 12 ifaka izinketho ezintsha ze-3D Touch njengeskena sedokhumenti noma isithwebuli se-QR kuzinhlelo zokusebenza zeNothi neKhamera.
Nakhu ukuthi izaziso ziku-iOS 12
IOS 12 ifike nezindaba ezincane nokuthuthuka. Enye yalezo ezithuthukisa ukusetshenziswa kwe-iPhone yethu cishe ngaphandle kokuqaphela, kepha bese zibalulekile. Yilokho okwenzeka ezindabeni zezaziso ze-iOS 12.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 11.4 kuye ku-iOS 11.3.1
Sikufundisa ukwehlisela phansi idivayisi ene-iOS 11.4 enguqulweni ye-iOS 11.3.1, ngale ndlela singaqinisekisa ukuthi singakwazi ukufaka iCydia ngethuluzi le-Electra lapho i-CoolStar iyibuyekeza.
Setha isexwayiso sokuphakama kwenhliziyo nge-Apple Watch yakho
I-Apple Watch iyakwazi ukubona ukushaya kwenhliziyo okuphakeme ngezikhathi ezithile okungafanele ukuthi iphakanyiswe futhi ikuthumele isexwayiso. Lapha sichaza ukuthi ungayilungiselela kanjani.
Ungayilala kanjani i-iPhone ngenkathi ulalele i-Podcast noma lapho uyiqedela
Ngabe ufuna ukubeka i-iPhone ekulaleni okuzenzakalelayo ngenkathi ulalele i-podcast? I-iPhone yakho inalo msebenzi njengokwejwayelekile futhi sizothola ukuthi ungayisebenzisa kanjani
Ungayisusa kanjani unomphela i-ID ye-Apple
Ubumfihlo buba ngenye yezinsika eziyisisekelo zezinkampani ezinkulu. Ngemuva kokuvuselelwa koMthetho Wokuvikelwa Kwedatha, i-Apple ingeze ithuluzi lokususa okwesikhashana i-ID ye-Apple.
Ungayifaka kanjani ikhalenda eliphelele leNdebe Yomhlaba ka-2018 eRussia ku-iPhone yakho noma ku-iPad
Ngabe ufuna ukungaphuthelwa ngumdlalo owodwa weNdebe Yomhlaba elandelayo eRussia 2018? Sikukhombisa ukuthi ungangeza kanjani ikhalenda lomhlangano eliphelele ku-iPhone yakho noma i-iPad
Wazi kanjani amandla esignali ye-WiFi evela ku-iPhone
Ngabe ufuna ukwazi ukuqina kwamanethiwekhi e-WiFi asondele kuwe ngokuningiliziwe usebenzisa i-iPhone noma i-iPad? Lapha sichaza ukuthi ungakuthola kanjani ngohlelo lokusebenza
Ungazibuyisa Kanjani Izithombe Ezisanda Kususwa ku-iPhone
Ngabe ufuna ukuthola kabusha izithombe noma amavidiyo owasuse ngephutha ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod Touch yakho? Lapha sichaza ukuthi kulula kanjani ukuzithola
Ungaphatha kanjani ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukufinyelela i-Face ID ku-iPhone X
Kulesi sifundo sikufundisa ukuthi ukuphatha kanjani ukufinyelela ku-Face ID ngezinhlelo zokusebenza ezikwi-iPhone X. Ngale ndlela sizokwazi ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezikwazi ukufinyelela lolu hlelo futhi, uma kukhona ukungavumelani, khubaza ukufinyelela.
Izaziso ze-IMessage azikhali? Lokhu kungenzeka kuwe.
Bengilokhu ngiphethwe yisiphazamisi iminyaka evimbela ama-iMessages ukuthi angakhali noma angazise. Namuhla, ekugcineni, ngisitholile isisombululo futhi ngizokutshela ngaso.
Ungayithola kanjani incazelo noma ukuhunyushwa kwegama ku-iOS 11
IOS 11, njengezinguqulo zangaphambilini ze-iOS, isinikeza uchungechunge lwezichazamazwi ukwazi incazelo yamagama nokuhunyushwa kwawo ngeSpanishi
Uzisebenzisa kanjani izilawuli ze-PUBG 3D Touch ku-iPhone
Kulesi sifundo sizochaza ukuthi i-PUBG 3D Touch ilawula kanjani i-iOS nokuthi isebenza kanjani kalula.
Ungayibeka kanjani ingilazi emnene ku-iPhone X yakho [VIDEO]
Sikulethela isifundo sevidiyo sendlela yokufaka ingilazi egcwele isikrini ku-iPhone X yakho, ekuvumela ukuthi usebenzise i-iPhone X yakho ngaphandle kokwesaba ukwephula isikrini.
Ungawahlela kanjani amanothi ku-iPhone noma i-iPad ngezinsuku noma ngezihloko
Amanothi ku-iOS iyithuluzi elinamandla esilisebenzisa kakhulu osukwini lwethu nosuku. Kungakho okuqukethwe esikudalayo kufanele ku-odwe ngendlela enhle nangendlela evumelana kangcono nezidingo zethu.
Ungasithola kanjani isimo sewaranti ye-iPhone yakho ngohlelo lokusebenza lwe- «Apple Support»
I-Apple inikeza uhlelo lokusebenza lwe-iOS —iPhone ne-iPad— kusuka ku-Apple Support. Ngayo ungabheka iwaranti yemishini yakho ngokushesha futhi kalula
Ungakwenza kanjani ukudlidlizela ngokwezifiso ku-iPhone yakho
Ngabe ufuna ukudala ukudlidlizela okwenziwe ngokwezifiso kwe-iPhone yakho bese uyabela oxhumana naye othile? Sikufundisa igxathu negxathu
Ungazifaka kanjani izitika kuTelegram
Uma ukhathele ukusebenzisa izitika ezifanayo ngaso sonke isikhathi, kule ndatshana sikukhombisa ukuthi singangeza kanjani izitika ezintsha kuhlelo lokusebenza lwemiyalezo yeTelegram.
Ungakuphatha futhi ukhansele kanjani okubhaliselwe okukhokhelwe nge-akhawunti yakho ye-Apple
I-Apple ikuvumela ukuthi ukhokhe okubhaliselwe okuvela eceleni kusuka kumadivayisi akho, ngale ndatshana uzofunda ukuthi ungaziphatha kanjani futhi uzikhansele kubo bonke.
Ungasenza kanjani ngokwezifiso isikhungo sokulawula ku-iOS 11
Ukwenza ngokwezifiso isikhungo esisha sokulawula kulula kakhulu nge-iOS 11, ngoba i-Apple yandise inani lezinto esingazikhombisa noma sizisuse ngokushesha futhi kalula.
Vumela noma wenqabe ukuthengwa kwe- «Emndenini» nge Cela ukuthengwa
I-En Familia isinikeza indlela enhle yokwabelana nge-akhawunti nomndeni wethu futhi ngale ndlela kufanele ...
Ungakunika kanjani amandla noma ukhubaze ukukhanya okuzenzakalelayo ku-iPhone noma i-iPad nge-iOS 11
Ngabe ufuna ukusebenzisa ukukhanya okuzenzakalelayo kwe-iPhone yakho noma i-iPad nge-iOS 11 futhi awazi ukuthi ikuphi inkinobho? Lapha sikukhombisa ukuthi ungayithola kuphi
Ungalivula kanjani ifayela le-ZIP ku-iPhone
Sikulethela izinyathelo ukuze ukwazi ukuvula ifayela ngefomethi ecindezelwe ye-.ZIP kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad, enye indlela elula futhi esheshayo.
Angiyiboni enye idivayisi ku-AirDrop, yini engingayenza?
Okwamanje sonke kufanele sazi izinzuzo ze-AirDrop, kepha kulabo abangazi ukuthi kusho ukuthini noma ...
Ungazihambisa kanjani izinhlelo zokusebenza kalula ngeminwe emibili
Impela ngaphezu kweyodwa kini kudideka kancane lapho kufanele uhlele noma uphasise izinhlelo zokukodwa ...
Ungasiguqula kanjani isithombe sokhiye we-Live Photos esiboniswe kuzithombe ze-iOS
Ukwenza izithombe zakho ziphile kulula nge-Live Photo. Manje, isithombe esiyisihluthulelo —isithombe esiboniswa kumtapo wezithombe — asikukholisi, sishintshe kalula kanjalo
Le ndlela isebenza kanjani i- "Battery Health", isici esisha ku-iOS 11.3
Sichaza ukuthi imodi entsha ye- "Battery Health" isebenza kanjani nokuthi izifundazwe ezahlukahlukene lapho kutholakala khona ezethu zisho ukuthini.
Ungayibuyekeza kanjani i-HomePod enguqulweni yakamuva etholakalayo
Isipikha se-Apple, i-HomePod, naso sithola izibuyekezo zesoftware futhi sichaza igxathu negxathu ukuthi ungazifaka kanjani
Ungangeza kanjani noma ususe imininingwane yekhadi lakho lesikweletu kusuka ekugcwaliseni okuzenzakalelayo kweSafari ku-iOS
Ufuna ukususa noma ukufaka amakhadi esikweletu kusici se-Safari "Autofill" ku-iOS? Lapha sikushiya isifundo esiphelele ukusenza
Ungasetha kanjani umkhawulo wesikhathi ku-iPhone naku-iPad
Sichaza ukuthi ungasetha kanjani umkhawulo wesikhathi ekusetshenzisweni kwezicelo, okuthile okuwusizo kakhulu ezinganeni nasemidlalweni ye-iPhone ne-iPad.
Kungani uhlelo lokusebenza lwaseKhaya lungenayo iwijethi nokuthi ungazifinyelela kanjani ngokushesha izesekeli zethu
I-Apple izakhele ukhiye wayo ngaphakathi kwe-Control Center ezosivumela ukuthi sikwazi ukufinyelela kuzo zonke izesekeli shazi elilodwa, ake sibone ukuthi isebenza kanjani.
Amasu amane wokuthuthukisa ukubonwa kobuso noma i-Face ID
Sixoxa ngamasu athile angasiza i-Face ID ukuthi isebenze kangcono ngokubona ubuso bakho ezimeni ezithile
Ungasivumelanisa kanjani isikhala esiningi ku-iCloud kusuka ku-iPhone noma i-iPad
Ngabe i-5 GB yamahhala ye-ICloud Drive ayikwanele? Sikukhombisa ukuthi ungasivumelanisa kanjani isikhala esiningi ku-iCloud kusuka kudivayisi yakho ye-iOS (i-iPhone noma i-iPad)
Ungazivala kanjani izaziso kusuka kuMilayezo kusuka kuhlelo lokusebenza Lwabathumeli Abangaziwa
Uma ukhathele ukuthola imilayezo nge-iMessage evela kumthumeli siyaziwa futhi sigcinwe ku-ajenda yethu, kule ndatshana sizokukhombisa ukuthi ungayigwema kanjani.
Vimba othintana naye ku-WhatsApp
Sichaza okufanele ukwenze ukuvimba oxhumana naye ku-WhatsApp. Uma inombolo ikukhathaza futhi ufuna ukuyivimba isuka kuWhatsApp ukuze ingakuthumeli eminye imiyalezo, lezi yizinyathelo okufanele uzilandele.
Sikufundisa ukuthi ungakhubaza kanjani ukusesha i-iPhone yami, omunye wemisebenzi ebaluleke kakhulu futhi evikelekile i-Apple esinikeza yona uma kuziwa ekuvikeleni idivayisi yethu ekuntshontshweni noma ekulahlekelweni kwayo, kepha kwesinye isikhathi sidinga ukuyivimba ukuze sithengise iselula noma yini enye into.
Ungayigwema kanjani imigwaqo emikhulu nemigwaqo ekhokhelwayo ku-Maps ye-iPhone yakho
Ngabe ufuna ukugwema yonke imigwaqo emikhulu nemigwaqo ekhokhelwayo emizileni yakho ngemoto usebenzisa i-iOS Maps? Sichaza ukuthi ungakwenza kanjani ngezinyathelo ezimbalwa
Phinda uthole izithombe zakho, oxhumana nabo noma enye idatha kusuka ku-iPhone ngokushesha futhi kalula ngeFoneLab
Sekuyiminyaka embalwa njengoba ubuchwepheshe buguqukile, iningi lenu, impela nisukile ...
Izinqamuleli ezinhle kakhulu ze-3D Touch esinazo ku-Apple Watch
Sikulethela uhambo olufushane lwezinqamuleli ezithakazelisa kakhulu ze-3D Touch ku-Apple Watch, okuzokusiza ukuthi uhambe kangcono kakhulu ngokusebenzisa i-interface yomsebenzisi
I-Apple ingeza okokufundisa kwamavidiyo amabili amasha ukuthuthukisa amakhono ethu wokuthwebula
Inkampani ezinze eCupertino ithumele amavidiyo amabili amasha asikhombisa ukuthi singazuza kanjani kakhulu ngekhamera ye-iPhone yethu.
Ungayikhipha kanjani imemori ye-RAM ku-iPhone X ngendlela elula
Sizokukhombisa ukuthi ungayikhipha kanjani imemori ye-RAM ye-iPhone ngezinyathelo ezimbalwa ezilula.
U-Apple ushicilele amavidiyo amathathu amasha okufundisa ukuthi uthwebula kanjani nge-iPhone
I-Apple ivuselele isiteshi sayo se-YouTube ngamavidiyo amathathu amasha azosisiza ukuthi sithole okuningi ngekhamera ye-iPhone yethu, kokubili ngevidiyo nezithombe.
I-Apple ishicilela izikhangiso ezintsha ezigxile kumodi ye-portrait
Abafana bakaCupertino bathumele amavidiyo amasha amathathu esiteshini sabo se-YouTube lapho singabona khona ukuthi singazenzela kanjani izithombe ozishuthe zona sisebenzisa imodi yokuma ngobude, ukuthi singawahlela kanjani nokuthi singawengeza kanjani umphumela wokuphambana ezithombeni ezibukhoma
Ungasikhulula kanjani isikhala ku-iPhone yakho
IOS 11 neWhatsApp zisinikeza amathuluzi asivumela ukuthi siphinde sithole isikhala samahhala esiyigugu ku-iPhone yethu ozoyithokozela impela
Ungazihlola kanjani ngokushesha izibuyekezo ze-App Store
Sizokwazi ukuhlola ikhwalithi yokuhlaziya abasebenzisi abayishiya ku-iOS App Store
Ungayihlola Kanjani Impilo Yebhethri Lakho le-iPhone Kalula
Sekuyisikhathi sokwazisa ngalesi sifundo ukuthi singayihlola kanjani impilo yebhethri le-iPhone yethu futhi sikhawule amandla weprosesa.
Uwavula kanjani amathebhu asanda kuvalwa ku-Safari
Kulesi sihloko sikukhombisa ukuthi singawalulama kanjani amathebhu ebesiwavale ngaphambilini ku-Safari kudivayisi yethu ye-iOS, ngokushesha futhi kalula.
Indlela esheshayo yokwabelana ngezithombe-skrini zakho
Sikukhombisa indlela esheshayo yokwabelana ngesithombe-skrini ku-iOS ukuze ungachithi umzuzwana owodwa.
Ungayisebenzisa kanjani imodi yokuphequlula yangasese ku-Safari futhi usule umlando wakho
Imodi yangasese yeSafari isivumela ukuthi sibhekabheke ngaphandle kokushiya umkhondo emlandweni wethu wokuphequlula, umlando esingawusula ngesikhathi esifanele noma ngokuphelele uma singazange sikhumbule ngaphambilini ukusebenzisa le modi yokuphequlula.
Ngabe usebenzisa i-Netflix nedatha yakho yeselula? Lokhu kukuthakazelisa wena
Ngabe ufuna ukusebenzisa idatha encane usebenzisa i-Netflix ku-iPhone yakho noma i-iPad? Ngezilungiselelo ezilandelayo esibonisa ukuthi ungazenza ngaphandle kwezinkinga
Ungalungisa kanjani izilawuli ze-AirPod ku-iOS 11
Sichaza ukuthi singakulungiselela kanjani ukulawula kwama-AirPods ane-iOS 11 asivumela ukuthi silawule ukudlala ngokuthepha i-earphone ngayinye.
Ungalivimba kanjani ikhasi lewebhu
I-iOS isinikeza uhlelo oluhle kakhulu lokuvinjelwa esingakwazi ngalo ukuvimba ukufinyelela kumakhasi ewebhu kuphela, kepha futhi, singavimba ukufinyelela kunoma yiluphi uhlobo lokuqukethwe okungenasisekelo kwabancane. Funda ukuthi uvimba kanjani ikhasi lewebhu ngesifundo sethu.
Sizokufundisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani imilayezo ku-iCloud kusuka ku-iPhone yakho futhi kalula, ukuze imilayezo yakho ihlale ikhona.
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi i-iPhone yakho yintsha yini? Ngezinyathelo ezimbalwa ezilula ngemenyu yezilungiselelo zemodeli yakho uzokwazi ukwazi ukuthi ngabe yi-iPhone entsha, i-iPhone ebuyiselwe kabusha, i-iPhone engena esikhundleni noma i-iPhone yangokwezifiso
Ungawasusa kanjani amakhadi wesikweletu kusuka ku-iPhone yakho kalula
Sinohlelo lokugcina idatha yethu yokukhokha nekhadi lesikweletu ku-iOS, sizokufundisa ukuthi uyisusa kanjani le datha.
Ungayisetha kanjani i-iPhone ukuthi iphendule izingcingo ngokuzenzakalela
Ngaphakathi kokungeneka okungenziwa yi-iOS, sinakho umsebenzi osivumela ukuthi silungiselele i-iPhone ukuthi iphendule ngokuzenzakalela izingcingo esizithola ngemuva kwesikhathi esidlulile.
Ungamisa kanjani ukulanda okuzenzakalelayo kuwo wonke amadivayisi we-iOS
Indlela enhle yokukhubaza ukulanda okuzenzakalelayo, singavimba izinhlelo esizithengayo ku-iPhone, siphinde sizilande ku-iPad noma okuphambene nalokho.
Ungayenza kanjani ingasebenzi i-geolocation yezithombe esizithatha nge-iPhone
Uma senza kungasebenzi i-geolocation yekhamera ye-iPhone yethu, zonke izithombe esizithathayo ngeke zigcine imininingwane ye-GPS yendawo efanayo nganoma yisiphi isikhathi.
Ungalungisa kanjani usayizi wombhalo we-iPhone yakho noma i-iPad ukuze usebenze ngokunethezeka
Ngabe udinga ukulungisa usayizi wombhalo we-iPhone noma i-iPad? Lapha sichaza ukuthi sizokwakha kanjani isinqamuleli ukuze sibe nokuhlelwa okulula kakhulu
I-iPhone yakho igcina irekhodi eliphelele lazo zonke izindawo ozivakashelayo
I-iPhone ibhokisi lezimanga. Ubuwazi ukuthi ungafinyelela irekhodi lezindawo ezisanda kuvakashelwa nge-iPhone yakho? Siyakuchazela
Amaqhinga weSafari ukuzulazula ngokushesha okukhulu
Sizokunikeza amathiphu ukuze ukwazi ukusizakala nge-Safari futhi ukwenze ubhekabheke ngokushesha okukhulu
Sizokufundisa ukuthi uwabona kanjani futhi uwaphathe kanjani onke amaphasiwedi akho ngqo kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad lapho edingeka khona.
Ungayivimba kanjani i-iPhone ekuxhumaneni nenethiwekhi ye-Wi-Fi egciniwe
Sizokufundisa ukuthi ungayivimba kanjani i-iPhone ukuthi ixhume kunethiwekhi ye-Wi-Fi egciniwe ukuze ngaphandle kokukhohlwa iphasiwedi kufanele uyixhume ngokuzithandela.
Ingabe i-iPhone yakho ihamba kancane? Amasu amahle kakhulu wokuthuthukisa ukusebenza
Sizokufundisa amaqhinga asheshayo alula wokuthuthukisa kakhulu ukusebenza kwe-iPhone yakho ukuze ungadingi ukushintsha ibhethri
Ungawaphatha kanjani wonke amadivayisi abelwe i-Apple ID yakho
Sizokukhombisa ukuthi ungayiphatha kanjani i-Apple ID yakho kanye namadivayisi abelwe wona ngezinyathelo ezimbalwa ezilula ezizokwenza lo msebenzi ube lula ngangokunokwenzeka.
Ingabe ufuna ukungenisa izithombe kusuka ku-iPhone ziye kwi-hard drive yangaphandle? Sichaza ngendlela elula ukuthi ungakwenza kanjani uma unekhompyutha ye-Apple
Ungayisayina kanjani idokhumenti kusuka ku-iPhone noma i-iPad usebenzisa iMeyili
Ukusayina kusuka ku-iPhone noma ku-iPad kulula kakhulu uma uthola idokhumenti ye-PDF kusuka kuhlelo lokusebenza lwe-iOS "Imeyili". Lapha sizokuchazela ukuthi ukwenze kanjani
Yabelana ngephasiwedi ye-Wi-Fi ngokuphazima kweso, isici esisha ku-iOS 11
I-Apple ihlele ku-iOS 11 uhlelo oluzosivumela ukuthi sabelane ngephasiwedi ye-Wi-Fi nabangane bethu ngokuzenzakalela, nansi indlela esetshenziswa ngayo.
Ungazisebenzisa kanjani izixwayiso zezimo zethrafikhi ku-iOS
Sizokufundisa ukuthi ungazisebenzisa kanjani izindawo ezihlala njalo nezixwayiso zesimo sethrafikhi ku-iOS ukuze uhlale unolwazi.
Ungawasebenzisa kanjani kalula amakhadi we-iTunes noma we-Apple Music
Manje sizogxila entweni ebalulekile, ukuthi ungahlenga kanjani kalula amakhadi akho e-Apple Music noma ama-iTunes ukuze uzuze kakhulu kuwo.
Izindlela ezi-3 zokuhlola isimo sebhethri se-iPhone yakho
Ngabe ufuna ukwazi ukuthi siyini isimo sebhethri le-iPhone? Sikunikeza izindlela ezintathu zokuzihlolela wena usekhaya
Ungayithola kanjani i-PIN yokuvula enamadijithi amane ku-iPhone yakho noma ku-iPad
Ingabe i-PIN yakho enezinombolo ezi-6 yokuvula i-PIN iyacasula? Ingabe ufuna ukubuyela emuva ku-PIN yokuvula enamadijithi angu-4? Lapha sikutshela ukuthi ukwenze kanjani
Ungazikhipha kanjani ngokuzenzakalela izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi ku-iPhone yakho noma ku-iPad
Ingabe ungomunye walabo abafaka izinhlelo zokusebenza ezifana ne-crazy bese bakhohliwe? Yebo, yenza umsebenzi ukhiphe ngokuzenzakalela izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi ku-iOS 11
Ungayisebenzisa kanjani imodi yokukhulisa ingilazi ku-iOS 11 nokuthi yenzelwe ini
Impela usuvele uyawazi lo msebenzi uma ungumuntu osemnkantshubomvu osebenzisa i-iOS futhi selokhu wafika ...
Yenza kusebenze ukususwa okuzenzakalelayo ukuze ususe izinhlelo zokusebenza ongazisebenzisi
Sizofunda ukuthi singakusebenzisa kanjani ukususwa kohlelo lokusebenza okuzenzakalelayo ngalesi sifundo esilula se-iOS 11.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 11.2 kuye ku-11.1.2 ngaphandle kokulahlekelwa yidatha
Ngakho-ke sizokukhombisa ukuthi ungayilanda kanjani inguqulo ye-iOS kusuka ku-iOS 11.2 kuye ku-11.1.2 ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane.
IHoudini, into esondelene kakhulu neJailbreak ye-iOS 10.x
IJailbreak ibuyile sethula uHoudini, into esondelene kakhulu neJailbreak oyothola kule nguqulo ye-iOS, ake siyazi.
Ama-AirPod akho awadluli imali engu-99%? Le yindlela exazululwa ngayo
Abanye abasebenzisi babike ukuthi ibhethri ebhokisini le-AirPods alidluli i-99%, namhlanje sizokukhombisa ukuthi ungaxazulula kanjani le nkinga encane.
Sichaza ukuthi ungavumelanisa kanjani ngendlela elula, ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza futhi mahhala, amakhalenda e-iCloud ne-Google Khalenda
Ungayisebenzisa kanjani i-YouTube njengesidlali somculo sangemuva ku-iPhone
Sizokufundisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-YouTube ngemuva ukuze ukwazi ukulalela umsindo noma ngabe amavidiyo awadlalwa kusikrini
Finyelela ngokushesha izaziso ze-iPhone X ne-iPhone 8 Plus
Ngabe ufuna ukufinyelela ngokushesha kuzaziso ze-iPhone X? Lapha sikushiya isifundo ukuze uthole ukuthinta okukodwa ukuze ufinyelele kuzo
Ungalanda kanjani amaphephadonga we-iPhone X akhethekile
Ukukhishwa ngakunye okusha kwe-iPhone kuvame ukufika kuhambisana namaphephadonga amasha, amaphephadonga opopayi abekade ...
Ungathumela kanjani izithombe nge-WhatsApp ngaphandle kokulahlekelwa ikhwalithi
Ngaleli qhinga elilula sizokukhombisa ukuthi ungathumela kanjani izithombe nge-WhatsApp ngaphandle kokulahlekelwa yinoma iluphi uhlobo lwekhwalithi.
Sikufundisa ukuthi ungaguqula kanjani i-Animojis ye-iPhone X ibe yifomethi ye-GIF
Ngokuhamba komsebenzi, sizokwazi ukuguqula i-Animojis ye-iPhone X ibe yifomethi ye-GIF ukuze siyithumele emhlabeni wonke ngaphandle kwezinkinga.
Ungayifaka kanjani i-emulator entsha ye-iGBA 2.0 ku-iPhone yakho ngaphandle kwe-jailbreak
Ngabe ufuna ukudlala okwakudala okufana neLegend of Zelda, Mario Kart noma iFinal Fantasy kudivayisi yakho? Ungakwenza ngokufaka i-iGBA 2.0 emulator ngaphandle kwe-jailbreak
Sikufundisa ukusebenzisa iSiri ngokuthayipha esikhundleni sokusebenzisa izwi lakho
Funda ukusebenzisa iSiri ngekhibhodi esikhundleni sezwi, kuzokusiza ukuyisebenzisa ngezikhathi lapho ungakwazi ukukhuluma kakhulu.
Gcina ibhethri ku-iPhone X yakho ngokwenza kungasebenzi i- 'Press to activate'
Imisebenzi yokwenza kusebenze isikrini se-iPhone X ngaphandle kokuthinta inkinobho yohlangothi ebonakalayo kungabeka engozini ukusetshenziswa kwebhethri lakho. Sikufundisa ukuthi ungazivimbela kanjani
IOS 11 ifaka imisebenzi emisha njengomhumushi weSiri esivumela ukuthi siguqule imibhalo isuke esiNgisini iye kwezinye izilimi. Kuzoba nezilimi eziningi ngokuzayo.
Okokufundisa kokuthi ungazithola kanjani izithombe ezinde zokuvezwa nge-iPhone, inguqulo ye-iOS 11 nemiphumela yezithombe ezibukhoma
Sebenzisa kakhulu isitoreji sedivayisi yakho nge-iOS 11
IOS 11 iletha nomphathi wesitoreji esingazi ngayo ukuthi sisisebenzisa kanjani isikhala sedivayisi yethu ngokuningiliziwe.
Ungasisebenzisa kanjani isici esithi 'Ungaphazamisi ngenkathi ushayela' se-iOS 11
I-iOS 11 ingeze umsebenzi omusha: Ungaphazamisi ngenkathi ushayela. Sikukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungayimisa kanjani le nketho entsha ku-iPhone yakho
Ungawubona kanjani umlando wokuthenga we-App Store kusuka ku-iPhone yethu noma i-iPad
Omunye wemisebenzi emisha esiyinikezwa yi-iOS 11 uhlobene nomlando wokuthengwa, umlando esingabonisana nawo kusuka ku-iPhone yethu
Sibuya nezifundo zamanje, namhlanje sizokukhombisa ukuthi iziphi izindlela zokucisha, ukuqala kabusha noma ukusebenzisa i-iPhone X ngokuya ngezidingo zakho.
Ngokufika kwe-iPhone X, ezinye zezenzo ezaziwa kakhulu ngaphakathi kohlelo lwe-iOS sezishintshile. Futhi enye yazo ivala izinhlelo zokusebenza.
Ungashintsha Kanjani Ngokushesha Phakathi Kwezinhlelo Zokusebenza ku-iPhone X
Ngiguqula kanjani phakathi kwezinhlelo zokusebenza nge-iPhone X? Iqiniso ukuthi i-Apple yazi ukuthi ingasetshenziswa kanjani kahle le nqubo entsha, sizokutshela.
Ungahlola kanjani amaphesenti webhethri wangempela we-iPhone X
Into egqame kakhulu nge-iPhone X ukususwa kwenkinobho yasekhaya ezansi nesikrini esikhulu ...
Ungayisebenzisa kanjani i-Face ID ku-iPhone X ene-Apple Pay
Ingabe ungomunye walabo abasebenzisa i-Apple Pay ekuthengeni kwabo futhi ufuna ukuyisebenzisa nge-Face ID ye-iPhone X? Lapha sikukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani futhi uyisebenzise
Ungasithatha kanjani isithombe-skrini ku-iPhone X
Lona ngomunye waleyo mibuzo okulula ukuyiphendula kepha kunabasebenzisi abaningi abangazi, ngoba ...
Ungayishintsha kanjani i-akhawunti yakho ye-Apple iye ku-Cloud.com
I-Apple ekugcineni ikuvumela ukuthi uhlobanise i-akhawunti yakho ye-iCloud.com ne-ID yakho ye-Apple. Sichaza ukuthi kwenziwa kanjani isinyathelo ngesinyathelo ngezithombe nemiphumela yako.
Ungayisusa kanjani imiyalezo ye-WhatsApp ukuze umamukeli angakwazi ukuyifunda
Ngemuva kokuvuselelwa kokugcina, insizakalo yemiyalezo edume kakhulu, iWhatsApp, ekugcineni ikuvumela ukuthi ususe imilayezo isikhathi esilinganiselwe
I-WhatsApp manje ikuvumela ukuthi ususe imilayezo ethunyelwe kusuka ku-iPhone
Sikukhombisa ukuthi le misebenzi emisha ye-WhatsApp iqukethe nokuthi ungayisusa kanjani imilayezo osuyithumele ukuze kungabikho muntu oyifundayo.
Ngingayikhubaza kanjani i-True Tone ye-iPhone?
Sifuna ukukwazisa ukuthi ungayicisha kanjani i-True Tone yesikrini sakho se-iPhone ngezinyathelo ezimbalwa ezilula, siya lapho ngesifundo.
Ungazidlulisa kanjani izingxoxo zakho ze-WhatsApp kwi-iPhone yakho entsha
Sizokufundisa ukuthi ungazidlulisela kanjani izingxoxo zakho ze-WhatsApp kwi-iPhone yakho entsha ngokusebenzisa izinyathelo ezimbalwa ezilula.
Unezinkinga nge-iPhone yakho? Ukubuyisela kungakulungisa
Lapho inguqulo entsha ye-iOS ifika, kusho ukufika kwezindaba kepha nezinkinga, eziningi zazo ezisuswa ngokubuyisa i-iPhone yakho
Ungawashintsha kanjani amadivayisi ku-AirPlay nge-iOS 11
Ufuna ukwazi ukuthi ungayishintsha kanjani idivayisi yokudlala ku-AirPlay nge-iOS 11, siyifundisa yona esifundweni esikulungiselele sona.
Ungayenza kanjani i-GIF ku-iPhone
Sizokufundisa ukuthi ungayenza kanjani i-GIF ngendlela elula futhi esheshayo ngaphandle kokuya kwi-PC ukuyenza.
Ungazibuyisa kanjani izingxoxo zethu ze-WhatsApp
Ngabe ufuna ukuthola izingxoxo ze-WhatsApp? Sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani igxathu negxathu ukubuyisela izingxoxo ezindala
Ungawulalela kanjani umculo wamahhala ngeTelegram ku-iPhone yakho
Sizokukhombisa ukuthi ungawujabulela kanjani wonke umculo owufunayo ngeTelegram ngaphandle kwezinkinga eziningi futhi mahhala ngokuphelele.
Sikukhombisa okokufundisa okuncane ukukhansela lokho okubhaliselwe kuzinhlelo zokusebenza ezinamasevisi we-Freemium kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad naku-iTunes.
Ungasikhulula kanjani isikhala ku-iPhone ngokususwa okuzenzakalelayo kwezinhlelo zokusebenza nge-iOS 11
Ngenxa yomsebenzi omusha otholakala ku-iOS 11, singathola isikhala esingeziwe ngenkathi uhlelo lunakekela ukususa ngokuzenzakalela izinhlelo zokusebenza.
Ungayicisha kanjani i-iPhone noma i-iPad ngaphandle kwenkinobho yamandla
Ngenxa yesici esisha ku-iOS 11, singacisha i-iPhone ne-iPad ngokusebenzisa Izilungiselelo ze-iOS ngaphandle kokucindezela inkinobho yamandla.
Cindezela futhi ucindezele amafayela we-Zip nge-iOS 11 ne-Zipped
Ukucindezela nokucindezela amafayili nge-iOS 11 sekuyinto elula futhi esheshayo ngenxa yohlelo lokusebenza lwe-Zipped kanye nohlelo lokusebenza lwendabuko lwamaFayela.
Ukwabelana ngomndeni ngesitoreji se-iCloud nge-iOS 11
Sikukhombisa ukuthi ungabelana kanjani ngesitoreji sakho se-iCloud neqembu lakho lomndeni ngokushesha futhi kalula ngenxa ye-iOS11.
Sikukhombisa ezinye izindlela ezimbili zokubheka isimo sebhethri le-iPhone yethu noma i-iPad, kanye nemijikelezo yokushaja eqediwe.
Ungenza kanjani ngezifiso izandiso zemilayezo ku-iOS
Sikulethela ku-iPhone Vuselela okokufundisa ngezinyathelo ezimbalwa ezilula ukuthi kulula kangakanani ukwenza isishintshi sohlelo lokusebenza semilayezo ye-iOS 11
Indlela yokwenza ngokwezifiso ubuso beSiri ku-watchOS 4
Sizokukhombisa ukuthi izilungiselelo zobuso bewashi leSiri ziphi ze-watchOS 4 nokuthi ungakwenza kanjani kalula okuqukethwe kwabo.
Ngalesi sifundo sizonikeza isibuyekezo sokuthi ungawadlulisa kanjani amaringithoni ngqo kwi-iPhone kusuka ku-iTunes 12.7 ngekhebula le-USB.
Ungaguqula kanjani izithombe ezibukhoma zibe yi-GIF nge-iOS 11
Ngenxa ye-iOS 11 singaguqula ngokushesha izithombe zethu ezibukhoma zibe i-GIF ngaphandle kwezicelo ezivela eceleni
Ungayikhubaza kanjani i-Touch ID ne-Face ID ku-iOS 11
Uyazi ukuthi ungakhubaza i-Touch ID ne-ID ngokushesha? Ku-Actualidad iPhone sizokufundisa ukuthi kanjani ngendlela elula.
Le ndlela isebenza kanjani i-watchOS 4 entsha yokuqapha inhliziyo
I-watchOS 4 ifaka umsebenzi omusha wokuqapha izinga lokushaya kwenhliziyo ozothuthukisa ukusebenza kwethu nempilo yethu
Ungahamba kanjani kusuka ku-iOS 11 GM uye enguqulweni esemthethweni ngendlela elula
Ukungabaza kuvela ngokushesha nje lapho sifika ku-iOS 11 GM, ngingaqala kanjani ukusuka ku-iOS 11 GM ngiye kunguqulo esemthethweni? Sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani.
Ungakhubaza kanjani ukuzidlalela kwamavidiyo ku-App Store entsha ye-iOS 11
Kulesi sihloko sizokukhombisa ukuthi ungakhubaza kanjani ukudlala okuzenzakalelayo kwamavidiyo ku-iOS 11 App Store.
Ayikho ibhethri ene-iOS 11? Amathiphu wokuthuthukisa ukuzimela
Ngakho-ke sizokunikeza amathiphu afanele kakhulu ongakhulisa ngawo ukusebenza kwebhethri le-iPhone yakho nge-iOS 11.
I-Apple isishintshe ukusebenza kwezinkinobho ze-WiFi ne-Bluetooth ku-iOS 11, futhi sizochaza ukuthi zisebenza kanjani kusukela manje
Okufanele ukwenze ngaphambi kokubuyekeza ku-iOS 11
Ngaphambi kokubuyekeza ku-iOS 11 kufanele wenze uchungechunge lwemisebenzi ku-iPhone yakho noma i-iPad. Zithole futhi ujabulele izindaba ze-iOS 11 ngaphandle kwezingozi.
Ukwenza kusebenze isici se-AirDrop Control Center esilahlekile nge-iOS 11 inqubo elula kakhulu. Sichaza ukuthi sikwenze kanjani.
IOS 11 ingeza indlela esheshayo yokonga idatha nebhethri
U-Apple ucabange ngathi futhi wengeza ku-iOS 11 indlela enelukuluku lokonga okuningi ngangokunokwenzeka kudatha yeselula, ngokulondolozwa kwayo okulandela ibhethri
Gcina isikhala ku-iPhone yakho ne-iPad ngenxa ye-iOS 11
IOS 11 izosivumela ukuthi songe isikhala ngaphakathi kwamadivayisi wethu ngenxa yezinketho ezintsha ezihlanganiswe nohlelo oluzosisiza ukwenza kanjalo
Ungakhubaza kanjani i-AutoPlay ku-iOS 11 App Store
Sizobona ukuthi singakhubaza kanjani i-AutoPlay ku-iOS 11 App Store, ukusebenza okusivumela ukuthi sibuke amavidiyo afundisayo mayelana nezinhlelo zokusebenza.
Ungakususa kanjani ukufiphala esithombeni esithathwe nge-iPhone's Portrait Mode ku-iOS 11
Esinye sezici ezinhle kakhulu esinaso ku-iPhone 7 Plus yimodi ye-Portrait. Ngale modi umsebenzisi ...
Ungawathumela kanjani amavidiyo amade avela ku-WhatsApp futhi ungawasiki? Sikukhombisa indlela yokuthumela amavidiyo amade kunokuba i-WhatsApp isivumela.
Sikukhombisa ukuthi usikhulula kanjani isikhala ku-iPhone yakho ngalezi zindlela ezingama-7 ezizokusiza ukuthi ube nenkumbulo yamahhala ku-iPhone yakho noma i-iPad. Uzame konke?
Ungawuthumela kanjani umculo ku-iPhone ngaphandle kwe-iTunes
Sikufundisa ukuthi ungawudlulisela kanjani umculo ku-iPhone yakho ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes, ngalezi ezinye izindlela ukubeka izingoma zakho ozithandayo kuselula yakho ye-Apple.
Ungamisa kanjani izibuyekezo ze-ICloud Photo Library
Namuhla sikutshela ukuthi ungamisa kanjani izibuyekezo ku-ICloud Photo Library yakho ku-iOS naku-Mac uma unokuxhumeka kweselula kuphela
Sikutshela ukuthi ungawalanda kanjani amaringithoni we-iPhone mahhala noma wakhe izingoma zakho ezingomeni ozithanda kakhulu.
Konke mayelana ne-iOS 11 Control Center entsha
Sihlaziya enye yezinto ezintsha ezisezingeni eliphakeme ze-iOS 11 ze-iPhone ne-iPad: Isikhungo Sokulawula esisha nezinketho zaso zokwenza ngokwezifiso
Ungazithumela kanjani izingoma noma ulondoloze ezamukelekayo kusuka ku-WhatsApp
Ungathanda ukuthumela izingoma noma ugcine lezo ezitholwe ku-WhatsApp? Igcinwa kuphi imisindo ye-WhatsApp ku-iPhone? Ngena kahle uthole konke!
Faka i-iPhone kumodi ye-DFU
Funda ukuthi ungabeka kanjani i-iPhone kumodi ye-DFU ukubuyisela noma uma i-iPhone yakho ikhiyiwe futhi ingadluli isihenqo se-apula.
Sikutshela ukuthi uyibuyisela kanjani i-iPhone nezinyathelo okufanele uzilandele ukufometha i-iPhone nge-iTunes noma ngaphandle kwe-iTunes ukuyishiya efektri.
Ungawalanda kanjani amavidiyo we-Facebook ku-iPhone
Thola ukuthi ungawalanda kanjani amavidiyo we-Facebook ku-iPhone nokuthi iyiphi i-app ongayisebenzisa ukuthola amavidiyo. Ungavumeli lutho lukuvimbe ekulandeni amavidiyo we-Facebook
Yini okufanele siyenze uma i-iPhone yethu icisha kungazelelwe
Lezi yizinyathelo okufanele uzilandele uma i-iPhone yakho icisha yodwa nokuthi kufanele uzame ngaphambi kokuyisebenzisela insizakalo. Kungani iselula yami icisha kungazelelwe?
Ungasusa kanjani izinhlelo zokusebenza futhi ugcine isikhala ku-iPhone yakho noma ku-iPad
Uma ufuna ukonga isikhala sokugcina ku-iPhone yakho ne-iPasd, namhlanje sikutshela ngezindlela eziningi zokususa izinhlelo ongasazisebenzisi
Ungabuka kanjani futhi wabelane ngohlu lwadlalwayo lwe-Apple Music nabangani bakho
Ngokufika kwe-iOS 11 (manje isiyatholakala nakuhlobo lwe-beta yomphakathi), insiza yomculo yokusakaza i-Apple ...
Ungayifaka kanjani i-iOS 11 Public Beta 1 ku-iPhone yakho noma i-iPad
Thola ukuthi ungayifaka kanjani i-iOS 11 Public Beta ku-iPhone yakho noma i-iPad ngemuva kokwethulwa kwenguqulo yokuqala ye-Beta yomphakathi ye-iOS 11.
Ungayifaka kanjani i-iOS 2 beta 11 mahhala ngaphandle kwe-akhawunti kanjiniyela
Uma ufa ukuzama izindaba ze-iOS 11 beta 2, namuhla sikutshela ukuthi ungayifaka kanjani kwi-iPhone yakho noma i-iPad mahhala ngaphandle kokuba ngunjiniyela
Ungayizungezisa kanjani ividiyo ku-iPhone
Ungayizungezisa kanjani ividiyo? Sikutshela ukuthi ungakushintsha kanjani ukuma kwayo kusuka ku-iPhone noma i-iPad ngalokhu kukhetha kwezinhlelo zokusebenza ongeke wakuphuthelwa.
Ungayidlala kanjani i-PlayStation 4 ku-iPad yakho ngenxa ye-R-Play
Kuma-tutorials we-iPhone Actuality namuhla sizokutshela kancane ukuthi singayidlala kanjani i-PlayStation 4 ku-iPad yakho ngenxa ye-R-Play.
Ungayisusa kanjani i-akhawunti yethu ye-Facebook kalula
Sikukhombisa ukuthi ungayisusa kanjani unomphela i-akhawunti ye-Facebook. Faka uma ufuna ukususa iphrofayili yakho kule nethiwekhi yokuxhumana nabantu noma ufuna ukwazi ukuthi ungayenza kanjani.
Ngenxa yokusebenza okusha kohlelo lokusebenza lwamaNothi nge-iOS 11, singaskena amadokhumenti ngqo ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo ezivela eceleni.
IOS 11 ikuvumela ukuthi ubeke izilawuli zokuthinta kuma-AirPod akho, futhi zisebenza ku-iOS 10
IOS 11 ikuvumela ukuthi ungeze izilawuli zokuthinta kuma-AirPod ngokuzimela kwehedisethi ngayinye, futhi isebenza nge-iOS 10. Sichaza ukuthi kanjani.
Nge-iOS 11 singaphendula izingcingo ngokuzenzekelayo ngemuva kwemizuzwana embalwa
Kancane kancane futhi njengoba onjiniyela bephenya ukungena nokuphuma kwe-iOS 11, ku-Actualidad iPhone siyakwazisa ...
Ungasirekhoda kanjani isikrini sakho se-iPhone
Uyazi ukuthi ukurekhoda isikrini sakho iPhone? Sichaza zonke izindlela ezikhona zokukufeza: nge-WiFi, ngezintambo, ku-Windows, Mac, kusuka ku-iOS 11 ...
Ungayisebenzisa kanjani i-iCloud Keychain ku-iPhone
Sichaza ukuthi ungayilungisa kanjani i-iCloud Keychain, ukuthi isebenza kanjani, ilondoloza yiphi idatha nakho konke okudingayo ukuze uzuze kakhulu kuyo
Thuthukisa ukusebenza kwe-iPhone yakho ngalezi zindlela ezilula
Sikufisela uMgqibelo omuhle! Uhlelo lokusebenza lwe-iPhone, i-iOS, akusilo uhlelo olujwayele ukwehlisa ukusebenza kwalo ngokuningi kakhulu ...
Ungangenisa kanjani oxhumana nabo ku-iPhone
Sikutshela ukuthi ungenisa kanjani oxhumana nabo ku-iPhone kusuka ku-Gmail, i-Outlook, i-Yahoo, i-iCloud, iWindows, i-iTunes nokuningi. Dlulisa ikhalenda lakho ku-iPhone ngendlela elula
Ungawulalela kanjani umculo nge-Apple Watch
Sichaza ukuthi ungawulalela kanjani umculo nge-Apple Watch yakho, ukuthi ungawudlulisela kanjani umculo ku-Apple Watch nokuthi imaphi ama-headphone ongawasebenzisa
Ungasondeza kanjani ezithombeni ku-iOS ngaphandle kwe-jailbreak
Lapho uthatha izithombe, kuhlale kunconywa ukusondela endabeni ngangokunokwenzeka ukugwema ukwenza ukusondeza kwedijithali nge ...
Indlela Thumela Oxhumana kusuka ku-iPhone
Sichaza ukuthi ungathumela kanjani oxhumana nabo kusuka ku-iPhone yakho uye kwamanye amasevisi (i-gmail, i-iCloud ...) namanye amadivayisi (i-Android, iWindows, iMac) Umhlahlandlela ophelele kakhulu!
Luyini futhi lusebenza kanjani uhlu lwezifiso ku-iOS?
Sikukhombisa konke esingakwenza ngohlu lwezifiso ze-iOS nokuthi luyini ukusetshenziswa kwalo kwangempela
Ungawusula Kanjani Umlando Wokusesha Osobala ku-iPhone
Ukukhubaza umlando wokusesha kuyinqubo elula kakhulu ezosusa noma ikuphi ukusesha esikwenzile ku-iPhone.
Ungazivimba kanjani izingcingo ezivela ezinombolweni ezingaziwa nezicashile
Sikukhombisa iqhinga elincane ongavimba ngalo zonke izingcingo ezivela ezinombolweni zocingo ezingaziwa nezicashile.
Khulula isikhala ku-iPhone yakho ngokushesha ngaleli qhinga elidala
Konke lokhu kungashiywa ngemuva uma ucabanga ngaleli qhinga elithakazelisayo ebelikhona ku-iOS isikhathi eside futhi elingakongela isikhala.
Ungasetha kanjani izilawuli zomzali kuNintendo switch
INintendo switchch inomphelelisi ophelele wama-smartphones ethu asivumela ukuthi silawule ukusetshenziswa okwenziwa izingane zethu kukhonsoli.
Ungawusebenzisa kanjani umsebenzi "Wokulala" we-alamu yakho ye-iPhone
Okubalulekile manje ukwazi ukuthi umsebenzi "we-Sleep" we-iOS usebenza kanjani, futhi uma uzosisiza silale kangcono.
Ungawabuka kanjani futhi uwahlele kanjani amaphasiwedi ewebhusayithi agcinwe eSafari
Ukubuka nokuhlela amaphasiwedi wewebhusayithi agcinwe eSafari kulula kakhulu. Kulesi sifundo sikukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani.
Ungayifundisa kanjani i-iPhone yakho noma i-iPad ukubona ubuso babangani bakho
Sifuna ukukufundisa kusuka ku-iPhone News ukufundisa i-iPhone yakho noma i-iPad ukuthi ungabeka kanjani ikhathalogu izithombe ngokususelwa ekutheni ubani ovela kuzo.
Ungakhubaza kanjani izilinganiso ezingaphakathi nohlelo ku-iPhone naku-iPad
Sizokukhombisa ukuthi ungasikhubaza kanjani isici sokulinganiswa kwangaphakathi nohlelo ku-iPhone yakho noma ku-iPad.
Ungayenza kanjani ingasebenzi i-voicemail yenkampani yakho
Thola ukuthi ungayikhubaza kanjani i-voicemail yenkampani yakho kalula: IMovistar, iVodafone, iOrange, iYoigo, iMásMóvil, iLowi, iPepephone nokuningi.
Ubuwazi ukuthi ungashintsha igama le-Apple Watch yakho? Ungakwenza kanjani
I-Apple Watch akudingeki igcine igama efonini kuze kube phakade, ungayishintsha ngendlela othanda ngayo futhi noma nini lapho ufuna khona, namuhla sikukhombisa ukuthi kanjani.
Sikutshela ukuthi yini i-AirDrop, ukuthi imiswe kanjani nokuthi isetshenziswa kanjani ukwabelana ngamafayela phakathi kwe-iOS ne-MacOS. Uyazi ukuthi uwusebenzisa kanjani omunye wemisebenzi emihle yohlelo?
Kungani kubalulekile ukugcina amachweba we-iPhone ehlanzekile nokuthi ungakwenza kanjani
I-iPhone yakhelwe ukuba yinhle, yize iqiniso ukuthi muva nje okuhle J. Ive cha ...
Ungazisebenzisa Kanjani iziqeshana ze-Apple ukwenza Ubumnandi, Amavidiyo Amangalisayo
Sinesifundo esihle sokuthi iziphi iziqeshana ze-clip nokuthi ungakuthola kanjani okuqukethwe okujabulisayo nokuyiqiniso ngazo.
Ungakuthola kanjani ukusondeza okuningi ezithombeni kusuka ku-iPhone yethu
Leli iqhinga elincane elizosisiza ukukhulisa izithombe esinazo kulabhulali yethu ye ...
Ungayivikela kanjani i-akhawunti yakho ye-iCloud ekuhlaselweni nakubaduni
Sichaza izinyathelo zokuphepha eziyinhloko okufanele sizilandele ukunciphisa ubungozi bokuthi othile angakwazi ukufinyelela idatha yethu ye-iCloud
Ungayivula kanjani ividiyo kusuka ku-Safari noma ku-WhatsApp ngqo ku-YouTube
Namuhla sifuna ukukukhombisa ukuthi ungayivula kanjani ividiyo kusuka ku-Safari noma ku-WhatsApp ngqo ku-YouTube ukuze sikwazi ukusebenzisa wonke amathuba ayo.
Ungazithulisa kanjani izaziso zomsebenzi ezivela kubangani bakho
Ukwabelana ngomsebenzi wakho nabangani kukusiza ukuthi ufeze izinselelo eziphakeme nangaphezulu, kepha izaziso zingacasula
Ungayisindisa kanjani impilo yebhethri nge-Apple Watch
Sichaza amanye amathiphu alula azokusiza ukukhama ibhetri ye-Apple Watch kangcono kancane, uthole amahora ambalwa wesikhathi.
Ungasibuyisela kanjani isipele ku-Apple Watch yakho
Sichaza ukuthi singalugcina kanjani lonke ulwazi ku-Apple Watch yethu ukuze siluthole ngemuva kokubuyiselwa, noma ukuluthumela kolusha
Ungazisebenzisa kanjani izimo zeWhatsApp: ungawusebenzisa kanjani lo msebenzi
Hlala ujabulele umhlahlandlela wethu ngakho konke odinga ukukwazi mayelana nesimo se-WhatsApp, isici sayo esisha nesimangazayo.
Ungawaphrinta kanjani amadokhumenti kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad
Nge-iOS 10 nangethuluzi le-AirPrint singaphrinta amadokhumenti, izithombe namakhasi ewebhu nge-iPhone ne-iPad yethu ngaphandle kwezintambo.
Faka i-WhatsApp ++ ku-iOS 10 futhi ngaphandle kweJailbreak
Sikulethela enye indlela ngaphandle kweJailbreak kuWhatsApp, ibizwa ngeWhatsApp ++ futhi ikuvumela ukuthi ungeze imisebenzi nezilungiselelo ezintsha
Ungahumusha kanjani futhi uchaze amagama ku-iOS ngaphandle kwezinhlelo zokusebenza ezivela eceleni
Ngabe ufuna ukuchaza noma ukuhumusha amagama asuka ku-iPhone yakho futhi awufuni ukusebenzisa izinhlelo zokusebenza ezivela eceleni? Kungenziwa, futhi kulokhu okuthunyelwe sizochaza ukuthi kanjani.
Konke odinga ukukwazi mayelana nenganekwane: yethemba le khompyutha?
Sonke siwubonile umbuzo wokuthemba le khompyutha? kwenye yamadivayisi wethu, sichaza ukuthi kusho ukuthini nokuthi kusebenza kanjani
Ungabelana kanjani ngesikrini sedivayisi yakho nabangani bakho
Njengamanje kunamathuluzi amaningi nezinhlelo zokusebenza zomdabu zokwabelana ngesikrini se-iDevice noma iMac yakho namanye amadivayisi we-Apple.
Ungaziphoqa kanjani ukuvala izinhlelo zokusebenza ze-Apple Watch ku-watchOS 3
Ngabe uhlangabezana nenkinga ngohlelo lokusebenza ku-Apple Watch yakho? Kulokhu okuthunyelwe sizokufundisa ukuthi ungaphoqa kanjani ukuvala izicelo ku-watchOS 3.
Sichaza ukuthi i-Apple Watch iwufanelekela kanjani umsebenzi wethu womzimba nokuthi lezo zinhloso zansuku zonke ezisibeka kuzo zisho ukuthini ukuqonda ukuthi isebenza kanjani.
Ungakuthuthukisa kanjani ukuzimela okubi kwe-iPhone 6s yakho
Ku-iPhone News namuhla sizokunikeza amathiphu amancane ukukhulisa ukuzimela okubi kakhulu kwama-iPhone 6s.
Thuthukisa ukuxhumeka kwe-Apple Watch yakho nge-iPhone yakho ngenxa ye-WiFi
Sichaza ukuthi ukuxhumana kwe-Apple Watch ne-iPhone kusebenza kanjani nokuthi kungathuthukiswa kanjani kusetshenziswa amanethiwekhi we-5GHz yize kunemikhawulo yewashi
Ungawahumusha kanjani amakhasi e-web ku-Safari ye-iOS ngaphandle kokushiya isiphequluli
Ukuhumusha amakhasi wewebhu kusuka kwezinye izilimi nge-Safari kulula kakhulu ngenxa yohlelo lokusebenza lwamahhala lwe-Microsoft Translator.
UYalu, i-iOS 10.2 Jailbreak, isiyatholakala
I-Yalu 102 isiyatholakala ukufaka i-Cydia ku-iOS 10.2 kumadivayisi asekelwayo. Sichaza ukuthi singakwenza kanjani igxathu negxathu
Ungayijabulela kanjani i-emoji ye-iOS 10.2 ku-iOS 9 [Jailbreak]
Ngabe uphuthelwa noma iyiphi i-emoji ye-iOS 10.2 yokuba enguqulweni ye-iOS 9? Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani uma une-jailbreak.
Ungabelana kanjani ngezithombe nabantu abaningi abavela ku-iPhone yakho
Izinsizakalo ezahlukahlukene zokugcina amafu zisivumela ukuthi sabelane ngezithombe nabanye abantu kalula
I-iPhone yami ithola kepha ayithumeli ama-imeyili. Ngenzeni?
Ngenzenjani uma i-iPhone yami ithola kepha ingathumeli ama-imeyili? Kulokhu okuthunyelwe sikukhombisa okufanele ukwenze kuhlelo lokusebenza lweMeyili.
I-iPhone yami ikhombisa umlayezo "i-SIM engavumelekile". Ngiyixazulula kanjani?
Ingabe uwubonile umlayezo "i-SIM engavumelekile" kusikrini sakho se-iPhone? Ungakhathazeki. Kulokhu okuthunyelwe sikutshela konke odinga ukukwazi.
Sikukhombisa ukuthi yini ongayenza uma i-iPhone yakho ilahlekelwa ukumbozwa futhi iphelelwe yisiginali ngokubonisa isaziso se-NO SERVICE. Kwenzekani ku-iPhone yakho?
Ungabhangqa kanjani ama-headphone akho e-Bluetooth ne-Apple Watch yakho
Ngabe ufuna ukubhangqa ama-headphone akho e-Bluetooth ne-Apple Watch yakho futhi ungazi ukuthi uzoqala kuphi? Kulokhu okuthunyelwe sichaza lokho odinga ukukwazi.
Kungani isikrini sami se-iPhone sicisha lapho ngishaya ucingo?
Isikrini se-iPhone siyacima uma ngishaya ucingo. Kuyinto evamile? Kulokhu okuthunyelwe sichaza konke odinga ukukwazi.
Ungazilungisa kanjani izinkinga zomsindo ze-AirPods ne-Beats Solo 3
Uke waba nezinkinga ezizwakalayo ngama-AirPod? Sikukhombisa zonke izixazululo ezingaba khona zokulungisa ukukhubazeka komsindo kwama-AirPods.
Izingcingo ezivela ku-iPhone eyodwa nazo ziyakhala kwenye. Kwenzakalani?
Ingabe izingcingo ezivela ku-iPhone ziyakhala kwenye i-iPhone ngasikhathi sinye? Zama izixazululo esizinikeza kulokhu okuthunyelwe.
Ungasisebenzisa kanjani isici sokuDayela kuhlelo lokusebenza lwezithombe ze-iOS 10
Ubuwazi ukuthi kusuka ku-iOS 10 singenza ukuhlela okuyisisekelo kwezithombe zethu? Kulokhu okuthunyelwe sichaza ukuthi ungakusebenzisa kanjani Ukudayela kusuka kuhlelo lokusebenza lwezithombe.
Ungabelana kanjani ngezithombe ezibukhoma ezindabeni ze-Instagram
Sikukhombisa ukuthi ungabelana kanjani ngezithombe ezibukhoma ezindabeni ze-Instagram, okwakamuva ekubuyekezweni kwenethiwekhi yezokuxhumana, i-Instagram.
Ungahlola kanjani ukuthi umthengisi wamukela izinkokhelo nge-Apple Pay
Ngabe usuvele unekhadi elihambisana ne-Apple Pay kepha awazi noma ungalisebenzisa esitolo esithile? Kulokhu okuthunyelwe sikukhombisa ukuthi ungathola kanjani.
Sikulethela isisombululo senkinga yebhethri yebhokisi le-AirPods
Sizokukhombisa isisombululo esingaba khona, noma esesikhashana, sokukhipha ibhethri ecaleni le-AirPods.
Ingabe ulahlekelwe i-iPhone yakho? Umhlahlandlela wokukhiya noma ukuthola i-iPhone yakho elahlekile
Siya lapho ngalezi zeluleko eziyisisekelo namasu wokuthola kabusha amadivayisi wethu we-Apple iPhone.
Ungakukhubaza kanjani ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ku-Apple ID yakho
Kokufundisa kwanamuhla sizokufundisa ukuthi ungakhubaza kanjani ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili ku-Apple ID yakho.
Izinto ezinhlanu ongazenza nge-Apple Watch yakho nama-AirPods akho
I-Apple Watch ingumphelelisi ophelele kuma-AirPod ethu, sikukhombisa izinto ezinhlanu ongazenza ngewashi le-Apple namahedfoni
Ungayisula kanjani idatha yakho ye-Super Mario Run ngaphandle kokusula umdlalo
Namuhla ntambama ku-iPhone News sizokufundisa ukuthi ungayicisha kanjani idatha yakho ye-Super Mario Run ngaphandle kokususa umdlalo.
Isifundo sokuqhekeka kwejele i-iOS 10 ngeYalu ne-Cydia Impactor
Kulesi sifundo sikutshela konke odinga ukukwazi nge-jailbreak iOS 10 nge-yalu jailbreak kanye ne-Cydia Impactor.
Izicelo zokulanda amavidiyo we-YouTube
Namuhla sikulethela izinhlelo zokusebenza ezinhle kakhulu zokulanda amavidiyo we-YouTube ukuze ukwazi ukuwagcina womabili ku-iPhone yakho nakwezinye izinhlobo zamadivayisi.
Indlela yokwehlisela phansi kusuka ku-iOS 10.2 kuye ku-iOS 10.1.1 ukuthola i-jailbreak engaba khona
Amahemuhemu azwakala ukuthi kuzoba khona ukugqashuka kwejele kwe-iOS 10.1.1 kungekudala, ngakho-ke ukwehliswa kwemali kufanelekile. Sichaza kanjani.
Ungathola kanjani uLuigi, Toad, Yoshi noToadette ku-Super Mario Run
Ungabathola kanjani abalingiswa abaningi kuSuper Mario Run, sikhuluma ngoYoshi, Toad noPrincess Peach phakathi kwabanye.
Ungasisebenzisa kanjani isistimu yezinkanyezi kuMculo ku-iOS 10.2
Izilinganiso zezinkanyezi zohlelo lokusebenza lomculo sezibuyile ngokufika kwe-iOS 10.2. Kulokhu okuthunyelwe sikukhombisa ukuthi ungalusebenzisa kanjani lolu hlelo.
Ungaludlulisa kanjani ulwazi kusuka ku-iPhone yami luye ku-Android smartphone ngendlela elula
I-Apple yethule uhlelo lokusebenza kuGoogle Drayivu eminyakeni embalwa eyedlule esivumela ukuthi sidlulise imininingwane kusuka ...
Ungayicisha kanjani i-VoiceOver uma uyivule ngengozi
Ingabe i-iPhone yakho ikhuluma nawe lapho kungafanele? Ingabe i-iPhone yakho ayiphenduli? Isikrini asihambi? Kungenzeka uvule i-VoiceOver. Sichaza ukuthi ungayenza kanjani ingasebenzi.